"> स्थानीयबासिको गाउँपालिका अध्यक्ष लाई सन्देश मुलक पत्र – www.agnijwala.com
स्थानीयबासिको गाउँपालिका अध्यक्ष लाई सन्देश मुलक पत्र
कालिकोट । प्रिय पालिकामा महाराजाको रुपमा चिनिन खोज्दै गरेका मेरा महाराजा अध्यक्ष हजुर लाई म केभनि सम्बोधन गरु कुन कुरा वाट सुरु गरु अनि कुन कुरामा गएर अन्त्य गरु । अहिले मेरै जन्म भएको शुभकालिका गाँउपालिकाको निर्वाचित गाँउपालिका अध्यक्ष भएका छौ ।
सबै भन्दा पहिले त म हजुरलाई बधाई दिहालु तर कसरि दिउ हँ हजुरलाई बधाई ? साच्चै बधाई दिउ भने हजुरले गरेको कर्तुतले गर्दा मेरा ति गाँउपालिकाका सोझा नागरिकहरु संग हजुरले माफि माग्नुभो भने पनि साचिकै माफी देलान जस्तो लाग्दैन तेहि भएर बधाई दिन सकिन सरि भन्न चाहान्छु ।
मेरो अभिभाबक ज्यु मेरो सम्माननिय अध्यक्ष ज्यु मेरो गाँउपालिकाको रेखा कोर्न लाग्नु भएका बिग्य ज्यु हजुरका दुइ सयजना कार्यकर्ता लगायर मार्न लाग्नु भएको तथ्य प्रमाण हजुरको फोन रेकर्ड मसंग पुग्यो । यसमा असाध्यै खुसि छु म जस्ता समाजका नराम्रा कृयाकलाव, भ्रस्टचार, अपराध लाई निर्मुल गर्नका लागि रातदिन आफ्नो परिवारको ख्याल नगरि, समाजको भलाई चाहने सपुत हरु मार्यो भने अबश्य पनि देशलाइ फाइदा हुने कुरा प्रस्ट देखिन्छ र हजुर जस्ता बिज्ञहरु बाँच्न आबश्यक छ र हजुरको आयु धेरै लामो होस मेरो भगवान संग प्राथना छ अध्यक्ष ज्यु ।
अध्यक्ष ज्यु हजुरको त्यो फोन रेकर्ड सुनेर मेरा नाबालक छोरा र मेरि धर्म पत्नि आफ्नो ख्याल गर्नु संगै मरौंला यतै आउनु भनेर रोएर फोन गरेका गरेइ छन् हजुरले मलाई बारम्बार यसरि टचर गरि गरि मार्नु भन्दा छिटो मारेको भए मैले पनि सुख पाउथे र मेरो परिवारले पनि सुख पाउथे मेरो अभिभावक ज्यु ।
हजुर कालिकोट जिल्लाको सदरमुकाम मान्म बजारको जिरोपईन्ट स्थित संस्थामा जागिरे हुनु हुन्थ्यो मेरो पनि सोही बजारमा हजुरको जागिर गरेको संस्थाको कार्यालय अगाडी फोटोकपि पसल थियो । यो कुरा हजुरलाई सायत थाहा छैन होला भुलि सक्नु भयो कि आजभोलि सत्ताको मात चढेपछि । याद गर्नुत हजुरले मेरो पसलमा साउजि खालि बिलछकि दिनुन भनेर सोध्नु भएको कुरा ।
म सानै देखि यस्ता कुराहरुको बिरोधि भएर होला म हजुरको आफ्नो मान्छे बन्न नसकेको । मैले हजुरलाई जवाफ दिएको थिएनि केको बिल भनेर ? हजुरले भन्नु भएको थियो नि फोटोकपि गरेको थिए बिल ल्याउन भुलेछु भनेर । मैले हजुरलाई दिएको जवाफ यहि होइनर बजार धेरै ठुलो पनि छैन नजिकै त होलानि जुन पसलमा काम गर्नुभो तेही पसलबाट ल्याउनुन । त्यस पछिको त्यो हजुरको जवाफले आज सम्म मलाई लाग्छ हजुर जति बिज्ञ मान्छे यो संसारमै छैन होला ।
दुईटा खालि बिल पनि दिनसक्दैन यार भन्नेले मेरो गाँउपालिकामा कस्तो राम्रो काम गरौला र मैले हजुरदेखि आश गरुकी मेरो पालिकामा बिकाश हुन्छ भनेर ? त्यो दिन तेति जवाफ पायपछि हजुर जानु भो तर हजुरले गरेको कुराले मलाइ एक हप्ता भन्दा बढि पिरोलेको थियो ।
किनकि हजुरलाई त्यो संस्थाले मनो बिमर्श कर्ता भनेर नियुक्ति गरेको थियो त्यो संस्थाले धेरै खर्च गरेर बिभिन्न तालिमहरु लिन पठाउन्थ्यो त्यो खर्च बेकारमा गयो, खालि बिल माग्नेले पनि के नागरिकहरुको मनो बिज्ञान बुझ्छन होलात जस्ता अनेकौं कुराहरु खेलि रहन्थे । तेस पछि मलाई झन चिन्ता बढ्न थाल्यो किनकि हजुरले निर्बाचनका लागि टिकट पाउनु भयो र चुनाव पनि जित्नु भयो ।
अरु जनप्रतिनिधिहरु निर्बाचित भएर माला लगाएर जनताको हातबाट सम्मान भएको फोटा सामाजिक संजालमा सजि सजाउ थियो भने हजुरको फोटा अब खालि बिलहरु माग्दै हिड्ने दिन गए अब म सुखि तथा खुसि संसारमा प्रबेश गरिसके भनेर मस्त निन्द्रामा निदायको फोटो भाईरल भयो त्यो हजुरको पहिलो गल्ति थियो ।
निदाउनलाई त आफ्नो कोठापो प्रयोग हुन्छत सुत्नलाई बनाएको होर त्यो पार्टि कार्यालय ? हजुर निन्द्रा लागेर सुत्नुभो अथवा अन्य कुनै कारणले हो त्यो त हजुरलाई नै थाहा होला हजुरको त्यो फोटाले बजार निकै पायो र टीकाटिप्पणी पनि निकै पायो । तर हजुरको मान्ने देबिदेबताको कसम खाएर भन्छु त्यो फोटा मैले हालेको होइन र समचार पनि मैले लेखेको होइन तर सबै दोस मलाई दिनु भो त्यो भगवानले देखेका होलान ।
हजुरलाई त्यो गाँउपालिकामा सबै भन्दा पहिला वडा वडामा गागिहरु गुडाउला भनेर होकी ? चुनाब खर्च सबैभन्दा पहिला उठाई हाल्छु भनेर होकी ? पछि सबैले थाहा पाउछन् अरुले थाहा नपाउँदै अलि कमाई हालु भनेर होकी ? कसै संग सल्लाहानै नगरि सडकको डि.पि.आर. तयार गर्न पुग्यो र त्यो सफल भएन मान्नुस या नमान्नुस त्यो हजुरको दोश्रो गल्ति थियो ।
जिल्लाका सबै स्थानियतहले वडा वडामा गाडी पुगाई सके तर सबै स्थानिय तहहरु भन्दा पहिले डि.पि.आर. तयार गरेको त्यो हाम्रो पालिकाको कति वडाहरुमा यातायातका साधन गुड्छन् ? जवाफ छ हजुरसंग ? हजुरले रातदिन मेहेनत गरेर खनेका रोडहरु देखेर दुनियालाई हाँसो लाग्छ र हाँसिरहेकाछन् । सडकका मोडहरु अथवा घुम्तिहरु कस्ता हुन्छन् भनेर हेर्नलाई र बनाउन सिक्नलाई शुभकालिका जानु भनेर भन्छन् ।
अरु स्थानिय तहहरु भन्दा हजुरको आफ्नै पार्टिकै बहुमत भएको हुदा हुदै पनि गाँउपालिकाको केन्द्रको टुङ्गो लगाउदा कार्यपालिकाको नक्कली माइनुट सम्म बनाउन पछि पर्नु भएन है अध्यक्ष ज्यु ? यदी हजुरको निर्णय साँचो थियो भने अरु सदस्यहरुले पनि त सहयोग गरिहाल्थे होलानि होइन र ? हजुर भनेको मानेर सच्चिन चाहानु हुन्छ भने यो हजुरको तेश्रो गल्ति हो । त्यो प्रमाण मसंग छ हजुर मनोबिमर्श कर्ता तथा कानुनको बिध्यार्थि भएर कृतेमा फस्छु भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु भएन है ।
अरु स्थानिय तहहरुले पनि भ्रमण त गरे तर एउटा पनि किसान, बेपारि, शिक्षक जस्ता कसैलाई पनि नलगेर हजुरको त्यो जंगो टिम भ्रमणमा लगेर पालिकाको खर्च गरेको रकमले हजुरको वा मेरो पालिकामा केही परिबर्तन भएकोत देख्दैन त । केही नयाँ नै भएको छ भने भन्नु न राम्रो कार्य भएको सुन्न र हेर्न कति रहर लागेको छ अरु स्थानिय तहहरुका राम्रा राम्रा कुराहरु समचारमा आएको देख्दा ।
खास्सै यो काम पनि राम्रो गर्नु भएन जस्तो लाग्छ यो हजुरको चौथो गल्ति हो ।
हजुरका ति चुनाबमा ज्यान दिएर जिताउन लागेका साथिहरुलाई डोजर प्रयोग गर्न लगाउनु गल्ति त थिएन तर नियममा जानु भएन र अहिले आफैले थापेको पासोमा आफै फस्नु भयो यो हजुरको पाँचौ गल्ति हो । किनकि हजुरहरुको झगडा हेर्दा उनिहरुसंग मागेको कुरा वा रकम दिनु भएन अनि झगडा भयो । कति दुख गरेर एउटा डोजरत तेतै खसेकैछ अहिले सम्म नि तेति मेहेनत गरेर कमायको रकम तेतिकै दिन्थेर भन्या ?
साच्चै हजुरको त्यो चलाखि पन देख्दा अचम्म लाग्छ पालिकाको खाताबाट चालिस लाख रकम सम्म दिन पनि लगाउनु भएछ है ? कति सम्म बिज्ञ हजुर त्यो चालिस लाख दिदा कति सम्म कमिसन आयो यदी सच्चा नेता र नेतृत्व हुनुहुन्छ भने सबैले थाहा पाउने गरेर कति सम्म फाईदा भो त्यो ब्याजे होकी सापटी पैसाले यो हजुरको छैटौं गल्ति हो ।
पालिकाको खातावाट चालिस लाख झिकेर फेरि खातामा तिस लाख मात्र जम्मा गर्न लगाउनु भयो दश लाख कता गयो भनेर हिसावत राख्नु भएको होलानि होइनर ? कसरि सान्तना दिनु भो हजुरकोे त्यो ब्यहार देख्दा अपज भएर विज्ञप्ती निकालेर पत्रकारहरुसंग गएका ति वडा अध्यक्षहरुलाई के भनेर सान्त बनाउनु भयो ? के मा कुरा मिलेको थिएन र पछि गएर के मा कुरा मिल्यो अनि सबैजना चुप लाग्न बाध्य भए, यो हजुरको यो छैटौँ गल्ति हो ।
साच्चिकै भन्नेहो भने कर्णालि प्रदेशमा रहेको कर्णालि चुलो भन्ने होटेलमा बोलायर मलाई पिट्ने योजना समेत गर्न पछि पर्नु भएन है मेरा गाँउपालिकाका अध्यक्ष ज्यु मेरो अभिभावक ज्यू । यदी साच्चिकै हजुरले त्यो योजना नबनायर उनिहरुले मलाई बोलाएर त्यो हर्कत गर्न खोजेका हुन भने खोई त उनिहरुसंग हामि यसका अभिभावक हौँ किन तेस्तो गरेको भनेर सोधेको ? त्यो अडियो पनि मसंग सुरक्षित छ ।
उनिहरुले मलाई समचार किन लेखेको भनेर निउखोजेर हात पात गर्न खोज्दै थेत उनिहरुको बारेमा त मैले केही लेखेको थिनत । यदी असत्य समचार लेखेको भए कानुनको कटघेरामा उभाउन पनि त सकिन्थ्यो नि होईन र अध्यक्ष ज्यु ।
ति हजुरका लडाकु कार्यकर्ताको बिषयमा त के भनौ र ? बिना बिषय मलाई कुटपिट गर्न खोज्ने अध्यक्ष ज्युको इन्धन खर्चको बिबरण दिन सक्नु हुन्छर मलाई यातायातको साधननै नपुगेको वडामा तेत्रो इन्धन खर्च कसरि आयो यसको जवाफ छ हजुरसंग । यदि आफ्नो गाँउपालिकाका नागरिकहरुले गलत नै गरेका भए सम्झाइ बुझाइपो गर्नु पर्छ होलात मारेर समस्या हल हुन्छ होलात ? यो हजुरको सातौँ गल्ति हो ।
मेरा सम्माननिय अध्यक्ष ज्यू म कति लेखु लेख्दा लेख्दा मेरा हातमा ठेला बसिसके हजुरका बिज्ञ दिमागले गरेका यस्ता अबिस्मरणिय कार्यहरु कति छन् कति छन् । म अब एउटा मात्र कुराको सम्पुर्ण नागरिकहरुलाई जानकारि दिन चाहान्छु त्यो हो हजुरको नैतिक्ता ।
आफ्नै भर्ताबासि वडा नं. २ का एकजना अति सामान्य घरपरिबारमा हुर्कि पिठिउमा भारि बोकेर रातदिन मेहेनत गरेर छोरा जागिर खालान भनेर कति आस गरेका ति बुबाका छोरा भुपेन्द्र तिमिल्सेना लाई करारमा जागिर लगाई दिने भनि एक लाख घुस मागेको अजुरकै अडियो बाहिआयो दिने भुपेन्द्र तिमिल्सेनाले पनि मैले साठि हजार र पछि चालिस हजार जागिर खुवाई दिन्छु भनेर दिएको फोन रेकर्ड छ ।
तेहि कुराको समचार नबनाउनु मैले गलत गरेकै हौँ माफ गरिदिनु पर्यो भनेर फोन मार्फत भनेको कुरा बिर्सिनु भयो है अध्यक्ष ज्यू । हजुर कति ज्ञानी अनि बिज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा माथिका कुराहरुले सबै नागरिकहरु दक्ष हुनेछन भन्ने बिश्वास लिएको छु ।
अन्तमा म त्यो दिन हजुरलाई मेरो अध्यक्ष मान्ने छु जुनदिन हजुरका यस्ता खाले सबै गतिबिधिहरुको अन्त्य हुदैन भन्दै यस्तै खाले बिभिन्न गुनासाहरुको पत्र पठाईरहने बाचाका साथ अहिले लाई बिट मार्न चाहान्छु । मेरो आदरणिय अध्यक्ष ज्यु हजुरलाइ कोटि कोटि नमस्कार छ ।
तिला न्युज बाट साभार
उहि हजुरको अबिस्वासि पात्र
शुभकालिका, ६ कालिकोट